Android 5.0 Lollipop-ka LG G3 iyo adeegsigeeda xun ee isticmaalaha | Androidsis
Francisco Ruiz | | LG, Noticias, Noocyada Android
Muddo dheer waxaan kahadleynay nooca cusub ee Android iyo ujeedooyinka cusbooneysiinta ee boosteejooyinkeeda kaladuwan, shirkadaha kala duwan ee waxsoosaarka qeybta. Waa hagaag, hadda ma ogaan karno oo keliya sida la sheegayo, marka nooca cusub ee Android 5.0 Nalalka loogu talagalay LG G3, laakiin waxaan sidoo kale haysannaa sawirradii ugu horreeyay ee L ee isku xirnaanta iyaga u gaar ahG Optimus UI oo cusbooneysiinaya cusbooneysiintan casriga ah ee Android.
Qorshayaasha wadamada Kuuriya, ugu yaraan wixii aan awoodnay inaan ogaano ilaa hadda, noo sheeg inay ku talo jiraan LG G3, taas oo aan xasuusano inay tahay calanka shirkadda ee xilligan, ku hagaaji hagaajintaada Android 5.0 Lollipop kahor dhammaadka sannadkan 2014, sidaas noqoshada, malaha, shirkaddii ugu horreysay, gadaashiisa Motorola iyo Moto X 2014, ee cusbooneysiinta terminaalka noocaan cusub ee nidaamka qalliinka ee Andy fiican.
Sida sawirradii ugu horreeyay ee laga sii daayay Nalalka 5.0 ee Android ee LG G3, sida aan ku arki karno qab qabashadan Xiriirka cusub ee LG ee naxdinta leh, interface la yiraahdo Optimus UI taasi waxba kama tareyso waxtar u leh nidaamka qalliinka, dhab ahaantii, halkii laga bixin lahaa astaamo cusub iyo kordhinta khibrada isticmaale ee ay daahirka Android na siineyso, taas ka fog, is-dhexgalkaani wuxuu horjoogsanayaa waayo-aragnimada isticmaale illaa inta ugu badan
Tusaale wanaagsan oo tan ah, oo aanan u isticmaali doonin Launcher laftiisa tusaale ahaan maadaama ay fududahay in la beddelo adeegsiga soo degsashada iyo rakibida launcher kale Google Play laftiisa. Waa baararka ogeysiiska dhexdhexaadka ah iyo kan aan faa'iidada lahayn in shirkadu ay hirgalisay ama ku dhajisay sidaad uheshay nuqulkan cusub ee Nalalka 5.0 ee Android ee LG G3.
Daaha ogeysiiska ah ee ka fog inuu shaqeynayo marka loo eego midka ugu dambeeyay ee ku dhaca lollipop-ka Android, waxaa wax ka beddelay horumariyeyaasha LG, wuxuu ka saarayaa daah labalaab ah noocyada nadiifka ah ee 'Android' ee aan xusuusanno inuu leeyahay mid loogu talagalay Toggles iyo mid kale oo loogu talagalay ogeysiisyada naftooda . Isku soo wada xooriyoo mid, oo leh muuqaal argagax leh oo gebi ahaanba ka takhaluso waxa ku yimaada fikirka Naqshadaynta Maqaalka, in Google ay ku hirgelisay qaybtan caramelized-ka ah ee Android ee wali iman doonta.
Marka la soo koobo, waxaan sii wadeynaa inaan ka cabanno si ay magacyadu isugu dayaan inay horumariyaan wixii horeyba ugu fiicnaa Android, halkii ay ka ahaan lahaayeen dhammaan kiisaskan sida LG, Samsung, Sony, Huawei iyo kuwa kale oo badan oo soo saareyaal ah, kuwaas oo halkii sii qurxin oo u hagaaji is-dhexgalkaaga inaad ku darto qiimo astaantaada, waxa kaliya ee ay sameeyaan ayaa ah inay ka hor yimaadaan cusbooneysiinta iyo sidoo kale khibrada isticmaale ee macaamiisha oo dhan kuwaas oo ku aaminay iyaga inay doortaan terminal cusub oo Android ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » Sawirada ugu horreeya ee Android 5.0 Lollipop-ka LG G3, waa hab fiican oo lagu cusbooneysiin karo cusbooneysiinta!
Daahaas keli ah ee foosha xun ... waa midka google ku riday nacnaca. Waad seegtay inaad fiiriso nacnaca kahor qorista maqaalka, waxaan u maleynayaa, Hehe.
Waxaan hayaa wax ka badan intii aan arkay saaxiibkay iyo daaha Toggles ama toobiyeyaasha nidaamka Android 5.0 Waxba kuma laha tan LG G3.
Waxa argagaxa leh waa naqshadeynta balooggaaga iyo astaantaada.
Oo maxaad filaysay? Haddii dhammaan soo-saareyaashu ay dhigayeen lakabkooda ogeysiisyada tan iyo android 1.5, hadda ma LG ayaa qalad leh? Waxaad ka arki kartaa xiidmaha 1 km oo lab ah, marka lagu daro, adiga laftaada ayaa dib lagusoo celiyey, maadaama sawirada aad soo dhigtey aad arki karto sida 2 daah loo kala bixin karo, midna bilaa tooggaga iyo mid kale oo leh toglayaasha, sida nacnaca, waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin waa muuqaalkiisa, oo ku kala duwan shirkad kasta sababo la xiriira u gaar ahaaneed, laakiin kuma kala duwanaanta shaqada.
Ku jawaab murphy
Hab wanaagsan oo lagu dhaleeceeyo adoon ogeyn. Waxyaabo badan oo lg g3 uu hada haysto waxay ku cusbi doonaan android l. Waxaan leeyahay nexus 5 oo leh muuqaalka android iyo g3, marka waan ogahay waxa aan ka hadlayo. Fadlan, macluumaad kahor qorista
Ma fahmin waxa odhanaya laba indhoole ayaa la raray wax walbana waa la wada wada geliyey haddii sawirrada 2 iyo 3 si cad u muujinayaan inaanay taasi ahayn, wuu naqdinayaa isagoon lahayn tilmaan. hahahahaha aad u badan taasi waa hordhac uma maleynayo inay dhamaatay.
OO SIDA AY HORTA UGU SHEEGEEN MAXAA XUN NOOCA WAA LOGO IYO Nashqadeynta Websaydhkan
Wax yar fiiri oo waad arki doontaa sida shaqeynta labada indhoole ee 'Android Puro' si buuxda loogu rakibay sidii ay had iyo jeer ku sameeyaan lakabyadooda qaabeynta.
Halkan waad arki kartaa Adiguna waad ii sharraxaysaa haddii taasi ay tahay daah labalaab ah sida kan daahirka ah ee 'Android' ama uu yahay 'interface interface' dhab ah.
PIMPIM shaashadaha shaashadda hoose waxay ka socdaan kit kat
Dabcan PIM PIM waa inay muujiyaan faraqa u dhexeeya labada nooc.
Sidoo kale waxaan haystaa LG G3 oo cidina ma dhaleeceyso sida wanaagsan ee uu terminalku u yahay ama howlaha gaarka ah ee uu ula yimaado sida caadiga ah. Waxa kaliya ee aan dhaleeceynayo, had iyo jeer aragtidayda adeegsade ahaan, waa is-dhexgalka adeegsadayaasha xun ee LG ee hor istaagaya khibrada isticmaale ee Android Pure na siiso, marka lagu daro dib u dhigista cusboonaysiinta rasmiga ah wax badan.
Weli miyaad u maleyneysaa in Android 5.0 Lollipop uu noqon doono LG G3 kahor dhamaadka sanadkan?. Waxay horeyba ugu dhacday LG G2 iyo Kit Kat oo lafilayay dhamaadka sanadka 2013, had iyo jeerna waa sida ay sheegtay LG, aakhirkiina waxaan sifiican ugu soo galnay bishii Febraayo 2014.
Dhamaan waad salaaman tihiin, xitaa kuwa aan jeclayn astaanta iyo naqshada bogga.
Toosinta, iyagu waa isku mid
Shaashaddaasi waxay la mid tahay tan g3-gayga oo leh kit 4.4.2 oo haddii aan la ogeyn inay tahay mid la isku habeyn karo oo waad ka saari kartaa labadaba iftiinka iyo xakamaynta mugga iyo aaladaha widget-ka ee la arko, sidaas darteed baarka ogeysiinta ayaa weli nadiif ah.
Aragtideyda ayaa ah in la qoray iyada oo aan la ogeyn waxa laga qoray, anigoo leh tan oo aan ula kac aheyn in la xumeeyo.
waxay noqon doontaa Huawei ...
Ku jawaab felipito
Waan ku raacsanahay faallooyin badan, waxaad tagtay laba magaalo, maaddaama is-dhexgalka LG uu yahay mid fool xun sababta oo ah waa, laakiin in aysan bixin wax qiimo ah ayaa ka been badan haddii ay suurogal tahay marka aad dhahdo waxay bixisaa qiimo ka yar tan saafiga ah ee Android, maadaama ay Android nuqulkeeda saafiga ahi yahay bakoorad ku jirta dheecaanka, laakiin shaqooyinka ay ka diir badan tahay caanaha. Haddii adiga kuu yahay furaha kuu oggolaanaya inaad beddesho astaamaha barnaamijyada, kaasoo kuu oggolaanaya inaad xirto oo aad ku furto qasabad laba jibbaar ah, taas oo kuu oggolaaneysa inaad wax walba ku habboonaato taleefankaaga casriga ah, haddii waxaas oo dhan aysan adiga kuu shaqeyneyn, fahmaan waxa aad ula jeeddo adiga oo shaqeynaya.
Aad ayaan u jeclahay maqaalkaaga Paco, laakiin kan aad wax badan ka qabatay oo qofba sida uu sheego, wax fikrad ah kama lihid waxa fikradda ah "waxtar" ay ugu jirto lakabka shakhsi ahaaneed. Ma jiro dambi ama wax, laakiin ma aadan ahayn ujeeddo qodobkaan ku jirta.
Waan ka xumahay inaan kuu sheego inay ka foolxun tahay garaacista aabbe, waxaan waligeen haysan doonaa cyanogen
Ku jawaab duufaan
Waa maqaalka ugu daciifka ah ee aan ku akhriyay boggan. Waxay ku dhaleeceynayaan wax naqdinta iyaga oo aan lahayn shuruudo farsamo iyo ujeeddo. Iyagu waa kuwo iswaafaqsan marka loo eego qaabeynta, taas oo aan ahayn run run ah in Pure Android ay tahay tan ugu wanaagsan uguna wanaagsan ee aan laga doodi karin. Baro wax yar oo saxafiyad ah halkaasna waxaad ku siin kartaa maqaal ujeeddo leh oo aan ka buuxsamayn maadooyinka caadiga ah ee qoraaga. Waan ka xumahay inaad tan akhrido
Aad baan u ixtiraamayaa ra'yigaaga, saaxiib Agustín, in kasta oo aan aaminsanahay in aan qoraalkan marna qofna la ixtiraamin, waxaan kaliya ka dhiibanayaa ra'yigayga ku saabsan waxa aan ka fikirayo isdhexgalka LG, iyo in mar horeba aan kuu sheegayo ka isticmaale ahaan LG G2 iyo LG G3, oo aniga aniga oo aan labalabayn daqiiqad ka mid ah labada terminaal ee ugu fiican xilligan.
In istcimaalka isticmaalaha uu yahay mid lousy ah micnaheedu maahan in terminalka ama shaqooyinkiisa gaarka ah ay yihiin. Iyo arinta cusbooneysiinta rasmiga ah iyo ka tagida isticmaaleyaasha ku xayiran isbedelka ugu horeeya, oo aan la kulmin waqtiyada kama dambeysta ah ee ay naftooda ku soo rogaan wixii cusbooneysiin ah, iyagoo siinaya taariikho aan la kulmi karin sababta fudud ee ay warbaahintu u dhawaaqeyso una siiso "fiiri sida ugu wanaagsan waan sameyneynaa. " Waxa kaliya oo aan la hubin ama aflagaado ku saabsan waxaan kaliya tixraacayaa xaqiiqooyinka iyo wixii horeyba ugu dhacay Kit Kat ee LG G2 oo aan ka mid ahayn kuwii ugu dambeeyay ee hela casriyeynta la ballanqaaday ka hor dhamaadka sanadka.
Marka la soo koobo, waxaad noqon kartaa isticmaale nooc kasta ah, inaad jeceshahay boosteejooyinkooda laakiin aadan jecleyn in si joogto ah laguula kaftamo.
Waad salaaman tahay halkan waxaan rabaa inaan salaan ugu diro dhamaan qorayaashan wax ku qora bartamaha wadada. Waxaa jira oraah caan ah oo lagu dhaho kiisaskaan "Nacas nacasnimo, waa inay xanuujisaa" Waxaan jeclaan lahaa inaan arko waxa isbarbardhiga ah ee ka soo baxaya nacnaca ka shaqeynaya boosteejooyinka. Mahadsanid asxaabtaada dhabta ah
Jawaab Miguel Lopez
In jacaylka noocyada kale aan la ogaan karin, maxaa yeelay ma dhaleeceynayo qallafsanaanta is-dhexgalka Samsung ee u eg daaqad DOS ah oo aad u xun. Ugu yaraan lg ayaa dul dhigid ka sii fiican oo ka sii wanagsan dusha ka saaray
Jawaab Oscar Virviescas
Waad salaaman tahay saaxiib ... Fiiri, sidoo kale waxaan haystaa G3 muddo 3 bilood ah. Wax badan ayaan isku dayay oo waxaan dhihi karaa in is dhexgalka uu yahay mid aad loo habeyn karo iyada oo aan loo baahnayn barnaamij dheeri ah. Waxaan sidoo kale dhihi karaa inay tahay is dhexgal gebi ahaanba waxyoonay by Material Designe oo ka socda warshadda. Taasi waa sababta markii nacnaca yimaado, isbeddelka aan si weyn loo dareemi karin. Faahfaahinta kaliya ee taban ee aan arkay waa dib u dhaca joogtada ah ee ku-meel-gaadhka. Waxaan rajeynayaa inay ku hagaageyso cusbooneysiinta 5.0. Wax kasta oo kale ayaa i sixray. Salaan ka timid Chile.
Waad salaaman tihiin erix kan xiisaha badan shaki la'aan fikradaha oo dhan ayaa lagu ixtiraamaa halkan, sababtaas darteed ma tirtirayo faaladan xitaa haddii ay miisaanka igu leedahay, maadaama haddii wax aad caddeysay inuu yahay gebi ahaanba dhaqan xumo iyo hadal xun.
Marka laga hadlayo cusbooneysiinta LG G3, waa inaan kaliya ugu hambalyeeyaa LG dadaalka baaxadda leh ee ay ku jirto, dhammaan kheyraadka ay hayaan !!, kaas oo laba bilood oo kaliya lagu cusbooneysiiyay sidaasna looga jaray LG G3. Haatan aan aragno inta ay qaadaneyso inta hartay ee boosteejooyinka kor loo qaadi karo sida LG G2.
Salaan bahal !!.
Ka waran Francisco, marwalba waxaan haystay telefoonada Nokia Symbian iyo baryahanba Windows Phone, bishii Diseembar waan ka tanaasulay si aan u aado Android, gaar ahaan LG G3, taleefanka waa cajiib laakiin sidaad u leedahay, khibrada isticmaale, isdhex galkeeda waa wax laga naxo , maya wax badan ayaan ka ogahay Android marka waxaan rabaa inaan ku waydiiyo, ma jirtaa wado lagu badalo LG G3 xitaa hadii ay tahay shaashadda soo baxda markay ku soo wacaan ama ay ku soo wacaan? Shaashaddaas oo ah marka aad wicayso kaliya sawirka xiriiriyahaaga uu ka muuqanayo goobo yar? Waxaan helay Lollipop waxaanan u maleynayay inaan beddeli doono interface-ka, laakiin oh niyad jab, wax walbaa sidii hore ayay ahaadeen, Waad ku mahadsan tahay talooyinkaada, salaan.
Ka eeg dukaanka Play wixii dalab beddel ah ee Dialer ah, waxaa jira kuwa badan oo aad u wanaagsan.
Hagaag, ma jecli nacnaca cusub gabi ahaanba, batteriga wuxuu ka soo wareegay labo maalmood oo soconaya xitaa 24 saacadood, kaliya taas darteed aniga ima daneynayo, maxaa shit ah, halkii aan horay ugu socon lahayn ayaan dib ugu laabaneynaa interface midkood, wadarta buuxa.
Miyaad dib ugu laaban kartaa Kitkat oo hadday sidaas tahay, sidee? Mahadsanid.
Ku jawaab Marisa
Sure, biligleynaya kdz ama rakibidda xirmo kat rom
Weli miyaad u maleyneysaa in Android 5.0 Lollipop uu noqon doono LG G3 kahor dhamaadka sanadkan?. Francisco Ruiz, waxaan u maleynayaa in LG ay ku siisay Zas afka oo dhan iyo illaa iyo hadda, G3 waa la cusbooneysiiyay bilowga Diseembar, si hadda loo dhaho marmarsiiyo ah in aysan cusbooneysiin G2 waa xoogaa miskiin ah, maadaama Lg waxba kamuu odhan tusaalahan.
Ku jawaab Lorpin
Iskuxirku waa wax laga naxo, waxaan si wanaagsan ugu abaabulay asus phablet illaa cusbooneysiintani ay timaado. Waxaan u xiisay fudeydkii Kitkat.
Jawaab Rubem Dos Santos
Shaki la'aan, kitkat waa wax lala yaabo. Hal su'aal, waxaan arkay in isticmaalka xogta (SERVICE SO) ee lolillop lagu kiciyey iyadoo la tixgelinayo lg g3-kayga, sideen uga joojiyaa inay taasi dhacdo? Salaan.
Ku jawaab lukas
Waxaan gabi ahaanba ku raacsanahay fikradaada Francisco Ruiz. Kuwa karti u yeelashada ayaa kaliya ah inay qabsadaan meel lagu keydiyo, tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u heysata Android.
Anigu waxaan ahay mid ka mid ah kuwa lagu qasbay inay adeegsadaan androids kale oo kaydka ah oo aan xasilloonayn maxaa yeelay wax-ka-beddelka doqonnada ah ee noocyada iyo hawlwadeennada ayaa baabi'iya waayo-aragnimada rasmiga ah.
Jawaab Sergio Siñoli